खुट्टा किन सुन्निन्छ ? यसको कारण र रोकथामको उपाय - Medianp.com
खुट्टा किन सुन्निन्छ ? यसको कारण र रोकथामको उपाय
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष २८, २०७३१२:१०0	काठमाडौं । साधारण र जटिल दुवै अवस्थामा खुट्टा सुन्निने गर्छ । सामान्यतया दुइटै खुट्टा सुन्निन्छ । कहिलेकाँहि एउटा खुट्टा कम सुन्निएको पनि हुनसक्छ । खुट्टा के कारण सुन्निएको हो यसको पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ ।
खुट्टाको रक्तनलीमा समस्या भएमा एउटा मात्रै खुट्टा सुन्निन सक्छ । यसलाई डीप भेन थ्रोम्बोसिस भनिन्छ । रक्तनलीमा रगत जमेर रक्त सञ्चालन नभएर एउटा मात्रै खुट्टा सुन्निन सक्छ ।
खुट्टा सुन्निने धेरै कारणहरु मध्ये मुटु, मृगौला र फोक्सोका रोगहरु प्रमुख हुन् । मधुमेह, उच्च रक्तचाप र थाइराइडको कमी पनि प्रमुख कारणहरु हुन् । त्यसमध्ये पनि मुटु र मृगौला सम्बन्धी कारणहरु सबभन्दा जटिल मानिन्छन् ।
कहिले काहिँखुट्टा सुन्निने सामान्य कारण पनि हुनसक्छ । जस्तैः मोटोपना, गर्भावस्था, दैनिक धेरै समयसम्म उभिनुपर्ने वा एउटै स्थानमा धेरै बेरसम्म बस्दा पनि खुट्टा सुन्निने गर्छ । साधारण अवस्थामा खुट्टा सुन्निए आत्तिनु पर्दैन भने जटिल अवस्थामा भने तुरुन्त चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ ।
कसै कसैको औषधिका कारणले खुट्टा सुन्निएको छ भने भने औषधि परिवर्तन गरेको १–२ हप्तामा घट्छ ।मृगौलाको कारणले सुन्निएको हो भने बिहान उठ्ने बेलादेखि नै अनुहार सुन्निएको हुन्छ र दिन बित्दै जाँदा सुन्निएको घट्न थाल्छ ।
मुटुको कारणले खुट्टामा बढी र अनुहारमा कम सुन्निएको हुन्छ । बिहानमा कम र साँझ बढी सुन्निएको देखिन्छ । खुट्टा सँगसँगै हात, आँखाको वरिपरि वा अनुहार पनि सुन्नियो भने केही न केही समस्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
जुनसुकै कारण खुट्टा सुन्निएको हो भने पनि चिकित्सकलाई देखाएर आवश्यक परामर्शपछि उपचार गर्नु राम्रो हुन्छ ।
जिप दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइतेबलिउडका स्लिम–ट्रिम नायिकाहरु